Lisitry ny lahatsoratra amin'ny sokajy Vaovao hafa
DCS World New Stable famotsoran'i Eagle Dynamics	 Hits: 163	 Vote: 0	 Rating: 0
Fanavaozana ny fampandrosoana amin'ny DCS MB-339	 Hits: 243	 Vote: 0	 Rating: 0
DCS Open Beta News	 Hits: 190	 Vote: 0	 Rating: 0
Fanambarana Aerofly FS 2021 Ho an'ny iOS	 Hits: 180	 Vote: 0	 Rating: 0
Play DCS maimaim-poana mandritra ny 2 herinandro	 Hits: 211	 Vote: 0	 Rating: 0
Fanavaozana ny lozisialy OnCourse PF3 ATC	 Hits: 123	 Vote: 0	 Rating: 0
Lionheart Creations - Momba ny Piper Pacer Series	 Hits: 292	 Vote: 0	 Rating: 0
Fanavaozana DCS amin'ny Thunderbolt P-47D	 Hits: 241	 Vote: 0	 Rating: 0
MK-Studios dia nanambara ny sarintany ho an'ny 2021	 Hits: 311	 Vote: 0	 Rating: 0
Ny vondrona fiaramanidina manan-tantara dia tsara kokoa noho ny taloha	 Hits: 258	 Vote: 0	 Rating: 0
Little Navmap 2.6.6 Navoaka	 Hits: 369	 Vote: 0	 Rating: 0
VirtualUA - Trano fialan-tsasatra	 Hits: 170	 Vote: 0	 Rating: 0
IVAO / Zibomod dia manampy fanampiana SELCAL	 Hits: 218	 Vote: 0	 Rating: 0
Hetsika manidina VATeir Charity	 Hits: 268	 Vote: 0	 Rating: 0
DCS dia nanambara ny fiasan'ny modely amin'ny fitaovam-piadiana ho an'ny F / A-18C	 Hits: 287	 Vote: 0	 Rating: 0
Kanada Xpress Desambra 2020 Fanamby isam-bolana	 Hits: 187	 Vote: 0	 Rating: 0
Fanadihadiana momba ny fiarahamonina FlightSim 2020 izao an-tserasera	 Hits: 330	 Vote: 0	 Rating: 0
Verticalsim - Seranam-piaramanidina Clearwater ho an'ny MSFS sy X-Plane	 Hits: 384	 Vote: 0	 Rating: 0
Fanavaozana ny Volanta Development # 1 DCS ary maro hafa	 Hits: 338	 Vote: 0	 Rating: 0
FlightGear 2020.3 Navoaka	 Hits: 494	 Vote: 0	 Rating: 0
Tondrozotra momba ny fampandrosoana CloudSurf Asia Simulated	 Hits: 418	 Vote: 0	 Rating: 0
Kanada Xpress Novambra 2020 Fanamby isam-bolana	 Hits: 328	 Vote: 0	 Rating: 0
Ho avy tsy ho ela avy amin'ny sidina fotsiny The Hawk T1 / A ho an'ny Aerofly FS 2	 Hits: 246	 Vote: 0	 Rating: 0
Sidina tsy manam-petra 20.2 Navoaka	 Hits: 496	 Vote: 0	 Rating: 0
Ny sidina tsy manam-petra dia mamoaka 20.1	 Hits: 468	 Vote: 0	 Rating: 0
Ny fanavaozana farany sy lehibe indrindra ho an'ny F-15 C, D, E & I Eagle ho an'ny MSFS dia nampiharina tamin'ny fananganana lehibe ankehitriny ary ny F-15 dia nihatsara be dia be niaraka tamin'ny endrika vaovao sy fanamboarana ny ...
Nanana herinandro vitsivitsy be izahay nampiomana an'i Manchester ho ampiana amin'ny tsenambarotra sim! Elaela vao hiseho eo io, sy ho an'ireo rehetra izay nividy azy tamin'ny tranokalanay ...
Gaya manavao Vienna ho an'ny fiaramanidina X
Nanavao ny seranam-piaramanidina Vienna (LOWW) ho an'ny X-Plane 11, ho an'ny andiany 1.2, ny mpamorona ny fizaran-tany Gaya Gaya. Miala tsiny amin'ny fahatarana amin'ity iray ity, nanamboatra fanamboarana vaovao marobe izahay ary ...
X-Plane 11.52 Navoaka
X-Plane 11.52 dia patch-fix bug-fix izay misy ankehitriny. Ity famotsorana ity dia misy fanamboarana lozam-pifamoivoizana amin'ny kaody tambajotra, ary ny zotra komandy miasa ho an'ireo mpampiasa tsy afaka miditra amin'ny fikirana ...
Raha heverina, ny tetik'asa VSKYLABS Robinson telo (R22 / R44 / R66) telo dia novolavolaina niaraka tamin'ny ezaka lehibe sy ny fandrindrana. Ny R66 no voalohany nahatratra ny laharam-pahamehana v1.0, manaraka valo ...
Las Vegas ho an'ny MSFS dia nohavaozina ho v1.3. Fiovana: ny Resorts World Las Vegas dia nanampy tamin'ny fanatsarana bebe kokoa ny fanatsarana ny zava-bita noho ny fanatsarana ny v1.2 Teknolojia sy ny fanoloana ny artefta 3D sasany, McCarran ...
Fotoana hahazoana fampahalalana bebe kokoa momba ny shadeX Plugin ho avy atrehintsika: Namboarina voalohany ho fitaovana pikantsary tamin'ny voalohany dia hita fa mety hahasoa ny X-Plane amin'ny ankapobeny ny vokany. Ka niafara tamin'ny ...
KDEN dia nohavaozina amin'ny kinova 1.4, nitondra fanovana lehibe sasany teo amin'ny seranam-piaramanidina. Amin'ny maha addon fandefasana MSFS azy, nandalo fanaintainana nitombo niaraka tamin'ny simulator vaovao i KDEN. Ny tena ...
Bluegrass sy WestWind Airlines dia mihazakazaka ny hetsika isan-taona faha-20 Great Australian Air Rally amin'ny volana martsa. Ny rally dia misy tongotra 10 isan'andro. Ny fampahalalana momba ny sidina dia hatao ho an'ny FS2004, FSX, P3D ...
Skyline Simulation dia nampiseho sary WIP sasantsasany amin'ny toerana hahalalany ny Cincinnati / Seranam-piaramanidina Iraisampirenen'i Kentucky (KCVG) ho an'ny MSFS 2020. Cincinnati / Northern Kentucky International ...
Sky Simulasi dia manolotra fanitarana MD-10 maimaim-poana
Sky Simulasi dia manolotra am-pireharehana kinova vaovao an'ny McDonnell Douglas / Boeing MD-10 ho an'ny Prepar3D. Ity dia fonosana fanitarana izay mitaky ny fananana ny MD-11 azy ireo. Noho ny fangatahan'ny sarobidy anay ...
Ny sidina fotsiny ny sidina Airbus A300 ho an'ny P3D v5
Ireto misy tifitra vaovao an'ny A300 ao amin'ny P3D v5. Ny sary rehetra (maodely, endrika, atiny sns ...) dia feno ankehitriny ary tafiditra amin'ny dingana farany amin'ny rafitra fanaovana coding sy ny FDE izahay izao, koa ny famoahana tsy ...